Music bụ n'etiti ndị nyiwe na-eche ihu oké mpi. Ọtụtụ music artists-etinye na mgbalị dị ukwuu iji na-akpata aha maka ha utu aha iji ghọọ ma ama. Otú ọ dị, ị ga-ekweta na m na ndepụta bụghị mgbe nile ka ọhụrụ minimalists ọma oge ọ bụla. Otú o sina dị, isiokwu a mîdaha kasị nso-nso ranking nke n'elu iri artists niile ugboro dị ka ịdị ukwuu nke ha onyinye na na nkume, mba music, RAP music na ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama music Genres. Ndị a artists nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ndị kasị mma-ere music albums na ụlọ ọrụ.
Part 5.The Rolling nkume
Ọ bụ ezie na ọ we gabiga, Michael Jackson dere kasị nnọọ mma na pụrụ iche music na mgbe pụta n'oge oge ya. A nnukwu bi nke ụwa hụrụ ndị ya n'anya ikwọ na nkume version. Ọ na-ezo dị ka Eze nke Pop. Ihe niile banyere ya music na-agba egwú ekwekọghị bụ nnọọ ukwuu enweghị atụ.
Ị ga-nkwekọrịta na m na ndị a bụ ọtụtụ ịrịba gbalaga nke dịworo ndụ. Ha music bụ otú ụtọ na-akpọ òkù. Ha na-agụnye John, George, Pọl na Ringo. The music ha dere bụ ka ndụ taa dị ka ọtụtụ ndị ka na-mmetụta ịhụnanya na ha. Ndị ọzọ karịa songs, ha na-egwuri guitar na ndị ọzọ na ngwá egwú.
3. Dugara Zeppelin
Ndị a bụ ndị legendry nka onye aha dịghị mgbe a ga-ehichapu na music ndia. The gbalaga ẹkewetde nke Roger, Brian, Freddie na Jọn. Ha bụ ndị si Great Britain ha wee malite ha nkà talent na 1970.With Freddie Mercury ịbụ na-edu ndú na-agụ egwú, ha mepụtara oké egwu na oge ha ọtụtụ n'ime hich ka na ndị mmadụ si mmasị taa.
5.The Rolling nkume
The gbalaga guzobere 1962. Ha nile English ndị ikom na ndị majorly specialized na nkume music. Ha bụ ndị magburu onwe music artists emi ekewetde oké songs. Ụfọdụ n'ime ha kasị mma na-agụnye, "Gimme Chebe" na "World ịnyịnya." The ụwa ka na-esetịpụ jidesie ha songs taa. The songs dị nnọọ ada ọhụrụ n'agbanyeghị eziokwu na ha na-emepụta ogologo oge gara aga.
Naa bụ oké legendry music artist onye vocals nnọọ enweghị atụ. Ọ majored na Rock genre. Ọtụtụ ndị na-n'ezie mmasị ya creativity na-amị magburu onwe rhythmical songs nke bụ na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ma gee ntị ya songs, ịzụta otu nke ya albums na n'ebe ahụ ka ị ga-nwere ihe niile pụtara ziri ezi.
Nke a bụ amamihe Rock divas onye music iche oké creativity. Ọ bụ site na Canada na emewo songs na see ahịa karịrị oge. Ọ majors na-amị French dere songs. Onye nke ya kasị mma songs bụ "Titanic." Ọ bụ a song edemede, mgbe ụfọdụ omee na kwa a azụmahịa nwaanyị.
Mụrụ na America, Bob Dylan bụ oké song edemede na onye na-ese. Ọ bụ n'ụba nkà in-a me music na uri. Ọ bụ ezie na ya nkwuwa okwu kwuru bụ ndị kasị mma, o nwere a pụrụ iche n'ụzọ nke na ijikọta ha na abụ olu ụtọ na-etolite a dazing upshot. Onye a sịrị na abara beatles.